२०६७ चैत २४ गते विहीवार JANAMAT(Bi-Weekly) April 7, 2011
सन्दर्भ : प्रवेशिका परीक्षा
एसएलसी परीक्षा आम विद्यार्थीहरूका लागि फलामे ढोका मानिन्छ । कुनै बेला जमाना थियो एसएलसी पास गर्नु भनेको फलामको साँघुरो ढोका पार गर्नुजस्तै हो । तर, यस वर्ष पाल्पा जिल्लाको सन्दर्भमा एसएलसी परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा केन्द्रमा खटिएर गएका अधिकारीहरूका लागि एसएलसी परीक्षा फलामे ढोकाजस्तै भयो, अन्ततः त्यसैको तगारो बने, विद्यार्थी र अभिभावक ।
तसर्थ पनि पाल्पाको एसएलसी अन्य जिल्लाको तुलनामा केही बिवादास्पद बन्न पुग्यो । दर्छा, दमकडा, चापपानी लगायतका अन्य केही परीक्षा केन्द्रहरूमा कहिं परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश नगर्दै विद्यार्थीहरूको रूवावासी नै भयो, कतै शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरू चढेको गाडीमा ढुंगा मुढा प्रहार भयो, कतै परीक्षा केन्द्रमा खटिएर गएका निरीक्षकहरू नै विद्यार्थीका तारो बने, कतै कुट्ने प्रयास भयो भने कतै कुटाकुट पनि हुने अवस्था भयो । यसको खास कारण के हो ?
१) विद्यार्थीहरूमा चिट चोर्ने रणनैतिक योजना थियो, तर त्यो पूरा हुन पाएन ।
२) विद्यार्थीहरूले भने झै निरीक्षकहरूद्वारा विना कारण परीक्षार्थीहरूको सम्वेदनशील अंगहरूमा हात लगाइयो ३)
आवश्यकता भन्दा बढी कडाइको प्रयास गरियो र निर्दोष विद्यार्थीहरूले समेत गाली बेइज्जती सहनु पर्यो ४) शिक्षक अभिभावक वा अन्य कसैको बाहिरी ढाडस पाएका कारण विद्यार्थीहरू उत्तेजित भए र अमानबीय कार्य गरे ? वा कोही कसैको नियत नै त्यस्तै थियो ? यी र यस्ता विषयमा ब्यापक छलफल र बहसको माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्नु अनिवार्य छ । जसका कारण यो वर्षकोजस्तो अवस्था आगामी वर्षका लागि दोहोरिन नपाओस् ।
धेरैले अड्कलबाजी गरे, यो सबै सन्दर्भ गाइड, गेशपेपर वा अन्य साभार सामाग्रीसंग जोडिएको छ । त्यसमा केही कुरा सत्य होला । तर, मुख्य कारण फरक हुन सक्छ । कारण परीक्षा केन्द्र बाहिर थुपारिएका ज्याकेटका थुप्रोबीच चीटको संख्या निकै न्यून छ । कोही विद्यार्थी चोरेरै परीक्षामा उत्तीर्ण हुने नियतले आएका रहेछन् भने परीक्षा केन्द्र बाहिर भएका कडाइले केही हदसम्म गलत नियतको नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउँछ । तर अर्कोतिर हचुवा र समान दृष्टिले हेरेर गरिएका यस्ता गतिविधिले असल, मेहनती, कर्मठ, इमान्दार र लगनशील विद्यार्थीहरूको मनोवल गिराएको छ ।
अर्कोतिर कतिपय विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रमा छिर्नुअघि नै हतोत्साही बनाउने गरेको छ । त्यस्तै परीक्षालाई नै मनोमानी ठान्ने र हचुवाको भरमा चिटै सारेर भएपनि पास त भइन्छ भन्नेहरू थप उत्साहित हुने बातावरण बन्यो । त्यसैको प्रतिफल शिक्षा अधिकारीको गाडी फुटाउने, हातै हालाहाल हुने र अनाबश्यक हल्ला खल्ला भएको हो, जुन पक्कै राम्रो कुरा होइन । न्यायले गलतलाई कारवाही गर्छ, तर गलतलाई कारवाही गर्ने क्रममा सच्चा ब्यक्तिलाई कारवाही भएछ भन्ने कुरालाई कहिल्यै स्वीकार्दैन ।
शुक्रवारबाट यो बर्षको एसएलसी परीक्षा विधिवत सकियो । अबको गन्तव्य आगामी वर्षको एसएलसी परीक्षा कसरी मर्यादत र ब्यवस्थित बनाउने भन्ने नै हो । अब शिक्षा कार्यालयले योजनाबद्ध भएर एक वर्षको लामो अवधिमा रणनैतिक योजना तयार गर्नुपर्छ । जसका कारण गल्ती गर्नेहरू कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्छ, सच्चा र असल नियत भएकाहरूले सम्मानको वातावरण महशुस गर्न सक्नुपर्छ । शुद्ध र मर्यादित परीक्षा सञ्चालनका लागि जिल्ला स्थित सम्पूर्ण क्षेत्रका ब्यक्ति र संघ संस्थाको सहकार्य अनिवार्य छ ।
अर्को वर्षका लागि पहिले नै परीक्षा केन्द्रहरू ब्यवस्थित बनाइनुपर्छ, ता कि विद्यार्थी र परीक्षा अधिकारी बाहेक बाहिरी मान्छेलाई प्रवेश निषेध गर्न सकियोस् । सुरक्षाकर्मी, निरीक्षक तथा केन्द्राध्यक्षलाई समेत नैतिकता र सामाजिक परिवेशसंग निकट रहने गरि प्रशिक्षण दिइनुपपर्छ ता कि विद्यार्थीहरू नै गुरूहरू माथि जाइलाग्ने बातावरण नबनोस् ।
परीक्षा केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता हुनुपर्छ जहाँ विद्यार्थीले खुम्चिएर लेख्नुपर्ने बाध्यता नरहोस् । त्यस्तै यो वर्ष गल्ती गर्ने र गल्तीको प्रायश्चित समेत नगर्नेहरूलाई कारवाही गरिनुपर्छ जहाँ कारवाही हुन्छ है भन्ने सन्देश प्रवाहीकरण होस् यी र यस्ता सामान्य कुराहरूमा समेत दृढ भएर ध्यान दिन सके यो वर्षको पाठबाट आगामी वर्षमा सफलता पाइने छ । अन्यथा पोहोर पनि यस्तै थियो, असम् पनि यस्तै भयो भन्दै चित्त बुझाउने बाहेक अन्य कुनै बिकल्प रहँदैन । ०००